I-Woodie CCI Trend Forex Day Ukuhweba Isu | ForexMT4Indicators.com
Ikhaya Amasu we Forex I-Woodie CCI Trend Forex Day Ukuhweba Isu
Ukuhweba ngamathrendi asunguliwe kungenye yezinhlobo eziyisisekelo zamasu asetshenziswa abathengisi bosuku. Empeleni, abathengisi abaningi abaphumelele abaye bathola izigidi zokuhweba ngosuku basebenzisa lolu hlobo lwecebo. Abanye basebenzisa amasu okulandela umkhondo kuphela.
Isikhathi esisezingeni eliphansi singathambekela kwesinye isikhathi. Noma kunjalo, Amathrendi we-intraday angahlehlisa noma isiphi isikhathi ngokuya ngokujikeleza kwe-intraday. Ukubheja kwakho okuhle kungaba ukuhweba ngamathrendi asunguliwe ahambisana nezitayela zehora lesikhathi esiphezulu.
I-Woodie CCI Trend Forex Day Ukuhweba Isu kuyindlela elandelwayo yokuhweba yezinsuku enikeza amasignali okuhweba asuselwa kunkambiso yesikhathi esifushane kunesikhathi esisezingeni eliphansi kepha ahlungiwe ngokususelwa enkambisweni yesilinganiso esiphakathi senkambiso ejwayelekile.
4.3 Ungayifaka kanjani iWoodie CCI Trend Forex Day Trading Strategy?
Isikhombisi seSadukey siyinkomba yesikhashana ekhomba izinkomba zesikhathi esifushane.
Ibonisa umkhuba ngokumbondela imigoqo eshadini lentengo. Amabha aguqula imibala ngokuya ngokuqondiswa komkhuba. Amabha abomvu abekwe ngezansi kwamakhandlela entengo akhombisa inkomba yendlela yokuziphatha. Amabha aluhlaza okwesibhakabhaka abekwe ngenhla kwamakhandlela entengo akhombisa inkomba yenkomba ye-bearish.
Inkomba yeSuper Woodie CCI iyinkomba yenkomba esekwe ku-Commodity Channel Index (I-CCI).
I-CCI ngokuyisisekelo ibalwa ngokususa i-average Moving A average (Isikolo sebanga eliphezulu) kusuka Kumanani Ojwayelekile. Umehluko bese ulungiswa nge-kusho Deviation. Umphumela uyizibalo eziwela ngaphakathi kobubanzi phakathi +/-100 25% zesikhathi.
Abadayisi abahlukile bahumusha i-CCI ngokuhlukile. Abathengisi be-Momentum kanye ne-trend babheka izibalo ezinhle njengezinkomba zezibalo eziphakeme nezimbi njengokubonisa okuphansi. Imidwebo edlula +/-100 kubhekwa njengezinkomba zesikhathi esinamandla.
Abathengisi abaphendukayo ngakolunye uhlangothi bangabheka izibalo ezidluliselwe kude kude ne-midline njengesibonakaliso sokuphindeka okungenzeka.
I-Super Woodie CCI isuselwe kulomqondo. Kubonisa ukuqondiswa kwendlela ngokubonisa imigoqo ye-histogram. Amabha aguqula imibala ngokuya ngesiqondisi namandla endlela. Izitayela ezibuthakathaka zinombala oluhlaza okwesibhakabhaka kungakhathalekile ukuthi ibha inhle noma imbi. Amabha we-Lime akhombisa inkambiso ye-bullish enamandla kanye namabha abomvu akhombisa ukuthambekela kwe-bearish ngomfutho.
Leli su lisebenzela ukuthambekela kwesikhashana esifushane kususelwa kwinkomba yeSadukey futhi lihlungwa ngamathrekhi wesikhathi eside.
Umkhuba wesikhathi esiphakathi ususelwa kwisilinganiso esingu-50 se-Moving A average (Isikolo sebanga eliphezulu). Ukuqondiswa komkhondo kususelwa ekutheni intengo ihlobene ne 50 I-SMA kanye nomthambeka we 50 Isikolo sebanga eliphezulu.
I-Super Woodie CCI ibuye ikhombise ukuqondiswa kwendlela yesikhathi saphakathi namandla namandla esikhathi esizayo. Ukuqondiswa kwethrend namandla we-momentum ayahlungwa ngokususelwa kumbala wamabha we-histogram.
I- 50 Umugqa we-SMA kufanele ube uyashwibeka up obonisa inkomba yendlela ye-bullish.
Amabha we-Super Woodie CCI kufanele abe muhle futhi kufanele abe ngu-lime okhombisa ukuthambekela kwe-bullish ngamandla.
Lindela intengo ukubuyisa ebangele ukuthi imigoqo yeSadukey iguquke ibe umbala okwesibhakabhaka okwesikhashana.
Faka i-oda lokuthenga ngokushesha nje lapho imigoqo yeSadukey ishintsha iye ebomvu ekhombisa ukuqala kabusha kwendlela ye-DRM.
Setha ukulahleka kokumisa endaweni ephukile ngezansi kwekhandlela lokungena.
Vala ukuhweba lapho nje intengo ivala ngaphansi kwemigoqo yeSadukey.
I- 50 Umugqa we-SMA kufanele uthi shona phansi ukhombisa indlela yenkomba ye-bearish.
Amabha we-Super Woodie CCI kufanele angabi nasimilo futhi kufanele abe bomvu abonisa ukuthambekela kwe-bearish ngamandla.
Lindela intengo ukubuyisa ebangele ukuthi imigoqo yeSadukey ishintshe ibe umbala obomvu okwesikhashana.
Faka i-oda lokuthengisa ngokushesha nje lapho imigoqo yeSadukey iguqukela eluhlaza okwesibhakabhaka ekhombisa ukuqalwa kabusha kwendlela ye-bearish.
Setha ukulahleka kokumisa ephuphukile ngaphezulu kwekhandlela lokungena.
Vala ukuhweba lapho nje intengo ivala ngenhla kwemigoqo yeSadukey.
Le ndlela yokuhweba ingenye yezindlela eziningi zokuhweba ngomkhuba kulandela amasu ngezikhathi zesikhathi esiphansi.
Leli su livame ukukhiqiza okungenzeka okuphezulu kakhulu okusetshenziselwa ukuhweba uma liqondiswa nezindlela ezisezingeni eliphakeme lesikhathi, ikakhulukazi amashadi wehora-1 noma ama-4.
Kuhle futhi ukubheka imijikelezo ye-intraday yemali ngaphambi kokuhweba ngababili okuhambisana nakho. Ngokwesibonelo, uma uhlela ukuhweba nge-GBP ne-EUR pair eLondon evulekile, lapho-ke kungcono ukubhekisisa amabanga wemali ahlotshaniswa ne-GBP ne-EUR.
Ukuphathwa kokuhweba okusebenzayo nakho kuyimpoqo lapho kuthengiswa lolu hlobo lwecebo. Lokhu kufaka phakathi ukulahleka kokumiswa kokuphulwa kanye nokulandela ukulahleka kokuma ukuvikela inzuzo.
Isu leWoodie CCI Trend Forex Day Trading liyinhlanganisela yeMetatrader 4 (MT4) inkomba(s) kanye nesifanekiso.
Isu leWoodie CCI Trend Forex Day Trading Strategy linikeza ithuba lokuthola izici ezihlukile kanye namaphethini kumanani entengo angabonakali ngamehlo..
Ungayifaka kanjani iWoodie CCI Trend Forex Day Trading Strategy?
Landa iWoodie CCI Trend Forex Day Trading Strategy.zip
Iya kwesokudla ukukhetha iWoodie CCI Trend Forex Day Trading Strategy
Uzobona iWoodie CCI Trend Forex Day Trading Strategy iyatholakala kuShadi lakho
Isiqephu esedluleAMA Smoothed RSI Floating Levels MT5 Indicator
Isihloko esilandelayoRSI of AMA Levels Floating MT5 Indicator